July 2021 - Babal Khabar
Jul312021 by EditorNo Comments
एक्कासी किन घट्यो १५० सि-सी पल्सर बाइक को मूल्य यति धेरै ? यस्तो छ कारण
बजाज मोटरसाइकलको सबै भेरियन्टको मूल्य बढ्दा यस पटक एउटा भेरियन्टको मूल्य घटेको छ । बजाजको आधिकारीक विक्रेता हंशराज हुलास चन्द एण्ड कम्पनी प्रालिले विक्री गर्दै आएको पल्सर १५० को मूल्य घटाएको छ । नेपालमा विक्री हुने १५० सीसी सेग्मेन्टमा बजाज पल्सर १५० को हिस्सा करिब ५० प्रतिशत रहेको छ । यस्तोमा कम्पनीले यसको मूल्य घटाएर बजारमा आफ्नो पकड अझै बलियो बनाउन चाहेको देखिन्छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धि अनुसार नै यस वर्ष धेरै मूल्य बढाउनु पर्ने अवस्था आयो । यस्तोमा उत्पादक कम्पनीसँग नै पहल गरेर हामीले पल्सर १५० मा मूल्य घटाएका हौं’, कम्पनीको उच्च व्यवस्थापन स्रोतले मेरोअटोसँग भन्यो । यो पनि , नयाँ स्मार्टफोन नोकिया १.४ सार्वजनिक, यस्तो छ मूल्य र विशेषता होम्स एचएमडी ग्लोबलले आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन नोकिया १.४ सार्वजनिक गरेको छ । ६.५१ इन्च इड्ज–टु–इड्ज सम्म फैलिएको यो स्मार
पिरो बढी खानेले किन ? राख्छन् बढी शारिरिक स’म्पर्क ! यस्तो अचम्मको रहस्य
खानाको स्वादसम्बन्धी रुचि सबैको अलगअलग हुन सक्छ । कसैलाई धेरै पीरो र मसालायुक्त खाना मन पर्छ भने कसैको मुखमा थोरैमात्र पीरो पर्नाले पनि आँखाबाट पानी र कानबाट धुवाँ निस्किन थाल्छ । तर, एक नयाँ सर्वेक्षणले पीरो मन पराउने र नपराउनेको सम्बन्ध यौ’न जीवनसँग रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षणका अनुसार स्पाइसी लभर अर्थात् पीरो खान मन पराउने व्यक्तिले बेडरुममा आफ्नो यौन जीवन पनि स्पाइसी र रो’माञ्चक बनाउने देखिएको छ । जो पीरो बढी मन पराउँछन्, अन्य मानिसको तुलनामा उनीहरुले बढी यौ’न स’म्पर्क राख्ने वानरोलले गरेको एक सर्वेक्षणको नतिजाले इंगित गर्छ । यो सर्वेक्षणमा २ हजार व्यक्ति सहभागी थिए । उनीहरुलाई जीवनशैली, व्यक्तित्व र खानपानसम्बन्धी प्रश्न सोधिएको थियो । उनीहरुले स्पाइसी अर्थात् पीरो खानाको लागि १ देखि ४ को बीचमा रेटिङ पनि दिनुपर्ने थियो । १ को अर्थ पीरो अलिकति पनि मन नपराउने र ४ को अर्थ पीरो धेरै
सरकार बनेको एक महिना नपुग्दै अल्पमतमा देउवा, विश्वासको मत दिएका यी नेताले किन? लिदैछन फिर्ता !हेर्नुहोस्।
काठमान्डौ - प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा पूरा कार्यकाल बहुमत बचाउनेगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रक्रिया अगाडि बढाउने रणनीति बनाएका छन् । पाँचदलीय गठबन्धनका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका देउवा अहिले प्राविधिक रूपमा अल्पमतमा छन् । असार २९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त देउवाले यही साउन ३ गते प्रतिनिधि सभाबाट १ सय ६५ सांसदको समर्थनसहित विश्वासको मत पाएका थिए। तर पछिल्लो समय नेकपा एमाले माधव नेपाल पक्षको अलमल र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० को महन्थ ठाकुर पक्षले दलको आधिकारिकता गुमाएकाले उनीहरूको समर्थन रहेरनरहेको एकिन भइसकेको छैन। नेपाल पक्षका २२ र ठाकुर पक्षका १३ सांसदले साथ नदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा प्रतिनिधि सभाबाट कुनै विधेयक अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्थामा छन्। अर्थात्, यी दुई पक्षको साथ नहुँदा देउवाका पक्षमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, जसपा उपेन्द्र यादव प
छोरिले आफ्नो घर छोडेर परायाको घर जाने प्रचलन परापुर्व कालदेखिनै चलायमान प्रथा हो जसलाई बिवाह नामकरण गरियो र जुन तपाईं हाम्रो घर गाउमा चलिनेरहेको छ ।छोरी मान्छे भएपछि अरुको घर जानैपर्ने अवधारणा सहित यो अनन्तकालसम्म निरन्तर रहने र सो रहेमात्रै भाविपुस्ताहरुले आफ्नो ठाउँ पाउने कुरो सत्य हो । सामाजिक संजालमा हामिले चेलिले आफ्नो घर छोडेर सो घरलाई माइति बनाउदैगर्दा बिदाईको बेला धेरै चेलिहरु भावुक भएको नै पाउछौ ।किन मन नदुखोस् जुन घर आफ्नोे थियो अब त्यो माइति भयो ,मान्छे उहीँ छन् तर सम्बन्ध फरक भयो ।त्यस्तै कुनै बेहुलि भने बिदाईको बेला नाच्दै ,गाउदै ,रमाउदै गएको पनि हामीले सामाजिक संजालमै देखेका छौ । आजको यश शृङ्खलामा हामी ती बेहुलालाई देखाउदैछौ जस्ले आफ्नो बिवाहमा बेहुलि घर लग्दै गर्दा बिच्चै बाटोमा खोला आएपछि बेहुलिलाई तर्न असहज नहोस् भन्ने उनिले बेहुलिलाई उचालेर आफ्नो अङ्गालोमा बेरेर खोल
अदालतले लगायो टिकटक माथि प्रतिबन्धः कति गते बाट बन्द ?
आज राती १२ बजे देखि लागू हुने गरी अदालत ले लगायो टिकटक माथि प्रतिबन्ध काठमाडौं पछिल्लो समय विभिन्न देशहरुले लोकप्रिय भिडियो एप टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन्। सोही क्रममा पाकिस्तानमा पनि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।पाकिस्तानको एक अदालतले टिकटकमाथि प्रतिबन्धको आदेश दिएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। याे पनि पढ्नुहाेस् एक्कासी फेरी लकडाउन हुने मिती तोकियो, यति गतेबाट पुन देशमा लकडाउन सुरू हुँदै आउने साउन गतेदेखि पुन निषेधाज्ञा हुन्छ ? यो प्रश्नले सार्वजनिक यातायातमा चर्चा पाइरहन्छ। सर्वसाधारण जम्मा भएको ठाउँमा पनि यो प्रश्नले स्थान पाउँछ। सरकारले कर उठाउनैका लागि मात्र खोलेको हो भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियत्रण गर्न बनेको विधेयक २०७८ ले डिसीसीएमसीलाई कोरोना नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको ब
धेरै मानिस आफ्नो बढ्दो तौलका कारण तनावमा हुन्छन् र यसलाई कम गर्नका लागि विभिन्न तरिका अपनाउने गर्छन् । तर थोरैलाई मात्रै थाहा छ कि डाइटमा थोरै परिवर्तन गरेर निकै सजिलै तौल घटाउन सकिन्छ । केही फलफूल र सागसब्जीले प्रतिरोधी क्षमता बढाउनुका साथै तौल पनि नियन्त्रणमा राख्छ । यदि तपाईं आफ्नो तौल कम गर्ने कोसिसमा हुनुहुन्छ भने डाइटमा यी फलफूल र सागसब्जी समावेश गर्नुहोस् । खरबुजाःगर्मीमा खरबुजा खान सबैलाई मनपर्छ । खरबुजामा ९२ प्रतिशतसम्म पानी हुन्छ जसले शरीरलाई हाइड्रेट राख्ने गर्छ । खरबुजामा फाइबर बढी र क्यालोरी कम हुन्छ । खरबुजा खाँदा धेरै बेरसम्म भोक लाग्दैन र यसले गुलियो खाने इच्छालाई पनि कम गर्छ । खरबुजामा भिटामिन सी, ए, म्याग्नेसियम, पोटासियम र लाइकोपिन हुन्छ । यी सबै तत्वले तौल कम गर्नुका साथै गम्भीर रोगबाट पनि जोगाउँछ । मेवाः तौल कम गर्ने कोसिस गरिरहनुभएको छ भने आफ्नो खानामा मेवा समावेश
अर्काको नाममा परीक्षा दिने ४ जना पक्राउ,परीक्षा दिनेको सब सटिफिकेट नै खारेज
काठमाडौं । अर्काको नाममा मौखिक परीक्षामा सामेल भएका चारजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले दिएको जानकारीअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र दिपायलले खोलेको प्रहरी जवान लिखित परीक्षाको नतिजामा सफल भई मौखिक परीक्षामा सामेल भएका चार जना युवालाई नक्कली परीक्षार्थीको आरोपमा शुक्रबार पक्राउ गरिएको हो । प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा सुदीपकुमार रोकाया, सुन्दर चौधरी, दीपेन्द्र जप्रेल तथा रामनरेश चौधरी रहेका छन् । उनीहरुले लिखित परीक्षामा अन्य उमेदवार सामेल गर्न लगाई लिखित परीक्षा पास भएपछि अहिले मौखिक परीक्षामा आफैँ उपस्थित भएका कारण छानबिनका क्रममा पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय दिपायलका प्रमुख तथा प्रहरी नायब निरीक्षक केशव पन्तले जानकारी दिनुभयो । पक्राउ परेकालाई कीर्ते गर्न नहुने कसुरअन्तर्गत मुद्दा चलाउन म्याद थप गरी हिरासतमा राखिएको जिल्ला प
महिलाहरूले छा’डा भाषा रूचाउनुको अचम्मको कारण यस्तो छ !
सर्वसाधारणको चलनचल्तीमा छा’डा (अ’श्ली’ल ?) शब्दोच्चारण र गा’लीगलौ’जका शब्द निकै बढेको पाइएको छ । बालबालिकाले हेर्ने टेलिभिजन तथा सिने सामग्रीमा गा’लीगलौ’जका शब्द त्यति नदेखिए पनि आम जनजीवनमा भने यसको प्रयोग बढेर गएको एक अनुस’न्धानले देखाएको छ । ब्रिटिस बोर्ड अफ फिल्म क्लासिफिकेसन (बी’बीएफसी)ले को शोध अनुसार एक हजार बेलायतीमाझ गरिएको सर्भेमा एक तिहाइभन्दा बढीले त्यस्ता श’ब्दहरु पहिलेको तुलनामा बढ्तै बोल्न थालेको बताए । पाँच वर्ष पहिले आफूहरुले ती शब्द उच्चा’रणमा हिच’किचा’उने भए पनि हिजोआज सामान्य रुपमा प्रयोग गर्न थालेको उनीहरुको स्वीका’रोक्ति छ । रोचक त के भने त्यस्ता गालीका शब्दहरु उच्चारण गर्नेमा महिलाहरु अगाडि रहेको देखिएको छ । त्यस्ता महिला ३२ प्रतिशत छन् भने पुरुष २७ प्रतिशत । अझ रमाइलो के भने सन् १९९६ यता जन्मिएका ‘जेन’रेसन जेड’ पुस्ता गा’लीगलौ’जमा उदार देखिएको छ । त्यस
श्रीमतीलाई रङेहात अरुसँग भेटेपछी पर्यो हानाहान
झापा । आजकल श्रीमान बिदेशमा दुख गर्ने र श्रीमती नेपालमा अर्कै संग फरार हुने घटना दिन दिनै घटेका समाचारहरु आइरहेका छ्न । झापामा एक युवकले १३ बर्ष बिदेशमा दुख गरे । उनका २ जना छोरीहरु पनि छ्न तर घरमा श्रीमती अर्कै संग सम्पती लिएर फरार भएपछि श्रीमान बिगत १८ महिना बाट श्रीमतीलाई खोजी गरिरहेका छन । श्रीमती भेना भनिने एक युवक सङ फरार भएको उन्ले बताए । भेना सङ श्रीमतीको पहिला बाटनै नजिक सम्बन्ध थियो भन्दै उनले दुख मानेका छन । अहिले ९ बर्ष र १२ बर्षका छोरीको बिजोक भएको उनले बताए । श्रीमती लाने युवाका २ जना श्रीमती पहिलेनै भएको र अहिले आफ्नो श्रीमती लगेपछि तेस्रो बिहे गरेको पिडितले बताए । २ जना श्रीमान र श्रीमतीको भेट भएपछि नसोचेको भएको छ ।
यदि अाफ्नो तौल घटाउन मन छ भने कपडा नलगार्इ सुत्नुहोस , कपडा नलगार्इ सुत्दा यसरी घट्छ तौल र यति धेरै फाइदै फाइदा
** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ** मानव जीवनमा सुताई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो । कसरी सु’तिन्छ भन्ने कुराले पनि मानव जीवन कति सुखी छ भन्ने थाहा हुन्छ। सामान्यतया मानिसहरू आफ्नो सु’ताइबारे धेरै सोच्दैनन् । तर, ‘बेड–ला’इफ’ ले पनि कतिपय अवस्थामा सिङ्गो जीवनशैलीलाई धेरै सहयोग गरिरहेको पश्चिमा केही वैज्ञानिकहरू बताउँछन् । केही वैज्ञानिक र मनोविज्ञहरुका अनुसार शरिरमा कुनैपनि लुगा न’लगाइनकन सुत्नुका मुख्य फाइदाहरू यस्ता छन् : १. हा’इजेनिक हुन्छ :राती सुत्ने बेला पेन्ट वा अरू कपडा लगाएर सुत्दा शरीरमा विभिन्न ब्या’क्टेरिया प्रवेश गर्न सक्छ । त्यसैले पनि कुनैपनि लुगा न’लगाइनकन सुत्नु हा’इजेनिक मानिन्छ । जसले गर्दा शरीरमा राति गर्मी हुनसक्ने भएकाले पनि वैज्ञानिकहरू त्यसरी सुत्नुलाई हा’इजेनिक मान्छन् । २. राती सहज रूपमा सुत्न सकिन्छ :तपाईँ सुत्ने बेलामा शरीरको तापक